Warehouse Delivery | Majesty Family International Co Ltd ﻿
30.5.2019, Full time , Trading
•	နေ့စဉ် မိမိဂိုထောင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပစ္စည်းများကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စေရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
•	ဆိုင်များအတွက် Itemများကို ကူညီပြီး ထုတ်ပေးရသည်။
•	Store မှထုတ်သော Itemများကိုလည်း စာအုပ်တွင် မှတ်ပေးရမည်။
•	Ground Stock ကောက်ခြင်း၊ တစ်လတစ် ကြိ်မ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။-ဖောက်သည် နှင်.လုပ်ငန်းခွင် များသို. ပစ္စည်းများ ပို.ဆောင်ရန်။
•	ကုန်ပစ္စည်းများ ထိန်းသ်ိမ်းရန် နှင်. ပစ္စည်းပို.ဆောင်ရန် အတွက် လမ်းကြောင်း ဆွဲရန်။
•	ဖောက်သည်များ နှင်.ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန် မှူ့ကျေနပ်မှူ့ ရှိစေရန် အတွက် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန်။
•	သွက်လက်တက်ကြွ၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးအများနှင့် ပြေပြစ်စွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်၍လူအများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိအထက်တန်းအောင် နှင်. အထက်
•	လုပ်ငန်းအတွေ.အကြုံ၁နှစ် နှင်.အထက်
Company Industry: Warehouse Delivery
Job posted: 30/5/2019
162 Days, Full time , Trading
168 Days, Full time , Trading
Warehouse Delivery Logistics & Supply Chain Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Majesty Family International Co Ltd Logistics & Supply Chain Jobs Logistics & Supply Chain Jobs Warehouse Delivery Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Sagaing Region 43 Days